HomeKnowledgeမကျြလှညျ့ဆရာ အဘိုးအိုက မွေးမလေးကို ပေးတဲ့သငျခနျးစာ
တဈခါတုနျးက ရှာကွီးတဈရှာမှာ ထူဆနျးတဲ့ အဘိုးအိုတဈယောကျ ရှိတယျ ။ သူ့မှာ သိပျလှတဲ့.. မွေးမလေး တဈယောကျလညျး ရှိတယျ ။
အဘိုးအိုဟာ ကြှမျးကငျြပွီး သိပျတျော သိပျထကျမွတျလှတဲ့ မကျြလှညျ့ပညာကို ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ ။ အဲ့ဒီ ပညာရပျနဲ့ပဲ အသကျမှေးဝမျးကွောငျး ပွုခဲ့တယျ ။ သူ့မွမေလေးကိုလညျး အဲ့ဒီပညာတှေ သငျပေးခဲ့တယျ ။
တဈနမှေ့ာတော့.. လူစညျကားတဲ့နရောမှာ မကျြလှညျ့ပွတာပေါ့ ။ ပနျးပှငျ့ကနေ ငှစေက်ကူ ဖွဈတာတှေ ၊ ကွိုးကနေ မွှဖွေဈသှားတာတှေ စတဲ့ ပွကှကျမြိုးစုံကို ပွနတောပေါ့ ။ အားလုံးပွပွီးပွီ ဆိုရငျ ပရိသတျကပေးတဲ့ ငှကေိုပဲ ယူတယျ ။
ဒါပမေယျ့ အခုတကွိမျ ပွတဲ့ပွပှဲမှာ အဘိုးအိုက ထူးဆနျးတဲ့ စကားတဈခှနျးကို ပွောခဲ့တယျ ။
" မကျြလှညျ့ပညာ ဆိုတာ.. မှျောပညာ မဟုတျသလို တနျခိုးစှမျးအားတှေ မရှိပါဘူး ။ လိမျတာလညျး မဟုတျပါဘူး ။ မကျြလှညျ့ပညာမှာ လြို့ဝှကျခကျြတှေ ရှိတယျ ။ အဲ့ဒီ လြို့ဝှကျခကျြတှကေို မသိလို့သာ ခငျဗြားတို့ လာကွညျ့ကွတာ ဖွဈတယျ ။ ဒီနေ့ မကျြလှညျ့ပညာရဲ့ လြို့ဝှကျခကျြတှကေို ပွောပွပါမယျ ။ "
ပရိသတျကွီးဟာ အငျမတနျမှ စိတျဝငျစားသှားတယျ။ ကွိုးကနေ ဘယျလိုမွှေ ဖွဈသှားတယျ ။ ပနျးကနေ ဘယျလိုငှစေက်ကူတှေ ဖွဈသှားတယျ စသညျဖွငျ့ပေါ့ ခဏကွာတော့ အဘိုးအိုဟာ လြို့ဝှကျခကျြတှကေို အကုနျ ရှငျးပွသှားခဲ့တယျ ။
ပရိသတျလညျးပွောတုနျး ခဏတော့ စိတျဝငျစားတာပေါ့။ သိလညျးသှားရော.. သွျော ဒီလိုလုပျတာလား.. ဒါလေးမြားဟု မကျြလှညျ့ပညာကို စိတျမဝငျစားတော့ဘူးပေါ့ ။
နောကျတဈနေ့ မွေးလေးကို ချေါပွီး မကျြလှညျ့ သှားပွတာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ပရိသတျ တဈယောကျမှ မလာခတြေော့ဘူး ။ အဘိုးအိုက..
" မွေးလေးရေ ပရိသတျတဈယောကျမှ မလာပါလား..? ဘာကွောငျ့လဲ..? "
" အဘိုးက မနကေ့ပှဲမှာ လြို့ဝှကျခကျြတှေ အကုနျပွောပွလိုကျတာကိုး.. ဘယျသူက စိတျဝငျစားတော့မှာလဲ ။ "
" အေးဟုတျတယျ မွေးလေး.. အဘိုးအိုတဈသကျလုံး ကြှေးမှေးခဲ့တဲ့ပညာ အခုတော့ လြို့ဝှကျခကျြလညျး ပွလိုကျရော ဘယျသူကမှ စိတျမဝငျစားတော့ဘူး။ တနျဖိုးလညျး မရှိတော့ဘူး ။ "
" မွေးလေးလညျး မှတျထားပါ။ လြို့ဝှကျခကျြဖွဈတဲ့ မွေးလေးရဲ့ခန်ဓာကိုယျ အလှကိုလညျး ဘယျသူကိုမှ မပွရဘူးကှဲ့ ။ လြို့ဝှကျထားရမယျ ။ ဒါဆိုမွေးလေးရဲ့ မိနျးကလေးအလှဟာ တနျဖိုးကွီးတယျကှဲ့ ။ "
" ဒူးဖျောပေါငျဖျော ရငျသားတှေ ပျေါနရေငျ ဘယျသူမှ စိတျမဝငျစားတော့ဘဲ တနျဖိုးမရှိ ဖွဈသှားလိမျ့မယျ ။ ပွတုနျးခဏပဲ သူတို့က တနျဖိုးထားကွတာ ဒါကွောငျ့ အဝတျစားကို လုံလုံခွုံခွုံ ဝတျပါ ။ "
အဘိုးအိုဟာ သူ့ပညာနဲ့ရငျးပွီးတော့ မွေးလေးကို ဆုံးမခဲ့တယျ ။ Acc ထဲက ညီမငယျတို့ တဈတှလေဲ သိရှိနားလညျနိုငျပါစေ ။ အဘိုးအိုရဲ့ဆုံးမစကားကို နားလညျနိုငျပါစေ ။
အားလုံးသော အမြိုးသမီး အပေါငျးတို့လဲ ကိုယျ့တနျဖိုးကို ကိုယျတိုငျ ထိမျးသိမျးနိုငျကွပါစေ..
မျက်လှည့်ဆရာ အဘိုးအိုက မြေးမလေးကို ပေးတဲ့သင်ခန်းစာ
တစ်ခါတုန်းက ရွာကြီးတစ်ရွာမှာ ထူဆန်းတဲ့ အဘိုးအိုတစ်ယောက် ရှိတယ် ။ သူ့မှာ သိပ်လှတဲ့.. မြေးမလေး တစ်ယောက်လည်း ရှိတယ် ။
အဘိုးအိုဟာ ကျွမ်းကျင်ပြီး သိပ်တော် သိပ်ထက်မြတ်လှတဲ့ မျက်လှည့်ပညာကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် ။ အဲ့ဒီ ပညာရပ်နဲ့ပဲ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုခဲ့တယ် ။ သူ့မြေမလေးကိုလည်း အဲ့ဒီပညာတွေ သင်ပေးခဲ့တယ် ။
တစ်နေ့မှာတော့.. လူစည်ကားတဲ့နေရာမှာ မျက်လှည့်ပြတာပေါ့ ။ ပန်းပွင့်ကနေ ငွေစက္ကူ ဖြစ်တာတွေ ၊ ကြိုးကနေ မြွေဖြစ်သွားတာတွေ စတဲ့ ပြကွက်မျိုးစုံကို ပြနေတာပေါ့ ။ အားလုံးပြပြီးပြီ ဆိုရင် ပရိသတ်ကပေးတဲ့ ငွေကိုပဲ ယူတယ် ။
ဒါပေမယ့် အခုတကြိမ် ပြတဲ့ပြပွဲမှာ အဘိုးအိုက ထူးဆန်းတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ပြောခဲ့တယ် ။
" မျက်လှည့်ပညာ ဆိုတာ.. မှော်ပညာ မဟုတ်သလို တန်ခိုးစွမ်းအားတွေ မရှိပါဘူး ။ လိမ်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး ။ မျက်လှည့်ပညာမှာ လျို့ဝှက်ချက်တွေ ရှိတယ် ။ အဲ့ဒီ လျို့ဝှက်ချက်တွေကို မသိလို့သာ ခင်ဗျားတို့ လာကြည့်ကြတာ ဖြစ်တယ် ။ ဒီနေ့ မျက်လှည့်ပညာရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်တွေကို ပြောပြပါမယ် ။ "
ပရိသတ်ကြီးဟာ အင်မတန်မှ စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ကြိုးကနေ ဘယ်လိုမြွေဖြစ်သွားတယ် ။ ပန်းကနေ ဘယ်လိုငွေစက္ကူတွေ ဖြစ်သွားတယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့ ခဏကြာတော့ အဘိုးအိုဟာ လျို့ဝှက်ချက်တွေကို အကုန် ရှင်းပြသွားခဲ့တယ် ။
ပရိသတ်လည်းပြောတုန်း ခဏတော့ စိတ်ဝင်စားတာပေါ့။ သိလည်းသွားရော.. သြော် ဒီလိုလုပ်တာလား.. ဒါလေးများဟု မျက်လှည့်ပညာကို စိတ်မဝင်စားတော့ဘူးပေါ့ ။
နောက်တစ်နေ့ မြေးလေးကို ခေါ်ပြီး မျက်လှည့် သွားပြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပရိသတ် တစ်ယောက်မှ မလာချေတော့ဘူး ။ အဘိုးအိုက..
" မြေးလေးရေ ပရိသတ်တစ်ယောက်မှ မလာပါလား..? ဘာကြောင့်လဲ..? "
" အဘိုးက မနေ့ကပွဲမှာ လျို့ဝှက်ချက်တွေ အကုန်ပြောပြလိုက်တာကိုး.. ဘယ်သူက စိတ်ဝင်စားတော့မှာလဲ ။ "
" အေးဟုတ်တယ် မြေးလေး.. အဘိုးအိုတစ်သက်လုံး ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ပညာ အခုတော့ လျို့ဝှက်ချက်လည်း ပြလိုက်ရော ဘယ်သူကမှ စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ တန်ဖိုးလည်း မရှိတော့ဘူး ။ "
" မြေးလေးလည်း မှတ်ထားပါ။ လျို့ဝှက်ချက်ဖြစ်တဲ့ မြေးလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ် အလှကိုလည်း ဘယ်သူကိုမှ မပြရဘူးကွဲ့ ။ လျို့ဝှက်ထားရမယ် ။ ဒါဆိုမြေးလေးရဲ့ မိန်းကလေးအလှဟာ တန်ဖိုးကြီးတယ်ကွဲ့ ။ "
" ဒူးဖော်ပေါင်ဖော် ရင်သားတွေ ပေါ်နေရင် ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားတော့ဘဲ တန်ဖိုးမရှိ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ။ ပြတုန်းခဏပဲ သူတို့က တန်ဖိုးထားကြတာ ဒါကြောင့် အဝတ်စားကို လုံလုံခြုံခြုံ ဝတ်ပါ ။ "
အဘိုးအိုဟာ သူ့ပညာနဲ့ရင်းပြီးတော့ မြေးလေးကို ဆုံးမခဲ့တယ် ။ Acc ထဲက ညီမငယ်တို့ တစ်တွေလဲ သိရှိနားလည်နိုင်ပါစေ ။ အဘိုးအိုရဲ့ဆုံးမစကားကို နားလည်နိုင်ပါစေ ။
အားလုံးသော အမျိုးသမီး အပေါင်းတို့လဲ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ်တိုင် ထိမ်းသိမ်းနိုင်ကြပါစေ..